editor — Mon, 12/26/2016 - 21:07
editor — Sat, 07/09/2016 - 21:43
हरेक सचेत मानिस तीन चिजले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्दछ –भाव, अभाव र प्रभाव । यी तीनवटै चिज सर्वप्रथम उसले आफ्नो परिवारबाट ग्रहण गर्दछ । साथीभाइहरूबाट सापट लिन्छ । विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा गएर सिक्छ । हेरेर, भोगेर र गरेर सिक्छ । शिक्षाका आधुनिक सिद्धान्तमा पनि ज्ञानीहरूले यिनै तीन तत्वलाई सूत्र बनाएर भनेका छन् ।
सिक्न या नयाँ ज्ञान हाँसिल गर्न पुरानो कुरालाई बिर्सनु पर्छ । धोक्रो खाली नपारी नयाँ सामल राख्ने ठाउँ कसैको हुँदैन ।
Biju Subedi — Tue, 04/19/2016 - 21:31
क्रमशः वितिरहेको जिन्दगीमा एउटा नयाँ दिवस आउँछ भने, चारैतिर नयाँ आल्हाद आउँछ भने, सर्वत्र सबैले अभिनन्दन गर्छन् भने हो ! त्यो हो नयाँ वर्ष । गाउन मनलाग्छ गीत नयाँ भने, मुग्ध पार्ने प्रभात जो पदार्पण गर्छ भने त्यो हो नयाँ वर्ष । आशाको नवीन अध्याय सुरुवात हुन्छ भने, सुन्दर आयोजना रोजको आह्वान हुन्छ भने, नयाँ विश्वास सर्वत्र छाउँछ भने त्यो हो नयाँ वर्ष । प्रकृतिदेवीको रङ्गमञ्चका कठपुतलीहरूको राम्रो धेरै राम्रो जिन्दगीको मञ्चन हुन्छ भने त्यो हो नयाँ वर्ष । नयाँ प्रभात लिएर, नयाँ सोपान लिएर दृश्यपान गर्ने रहर जो जाग्छ भने त्यो समय हो नयाँ वर्ष ।
editor — Mon, 01/18/2016 - 04:17
editor — Sun, 12/06/2015 - 17:23
संसारै विचित्रको छ । सभ्यता यतिबिघ्न विकसित भैसक्यो कि मानिसहरू पुनः नाङ्गिने स्थितिमा आइपुगे । कोही फेसनलाई घटाउँदै नाङ्गिदै छन् भने कोहीचाहिँ जनावरका भुत्लाको व्यापारिक फेसनमा भएको कार्य प्रयोगका विरुद्धमा नाङ्गिदै गएका छन् । समाचारको दुनियाँलाई अपडेट गर्ने क्रममा मैले हालसालैको नयाँ पत्रिकाभन्ने अखबारमा बेलायतमा एकहुल मानिसहरू साइकलमा नाङ्गै सवार भएको देखेँ ।
श्रीमद्भगवद्गीतामा मनोचिकित्सा (अर्जुनरोगको श्रीकृष्णोपचार )
drajayrisal — Fri, 12/04/2015 - 20:03
(अर्जुनरोगको श्रीकृष्णोपचार )
कुरा थाल्नु अघि अलिकति परिचयको खाँचो पर्न सक्छ । म भनेको एक सादा जीवन बाँचेको मान्छे हुँ । नेपालीको औसतमा पढेलेखेको र सरकारी सेवाको प्रथमश्रेणी सरहको सेवामा जीवनका साठी वर्ष बिताउन लाग्दै गरेको व्यक्ति हुँ । अब केही वर्ष मात्र छ अवकास पाउन । यी मेरो जिन्दगीका साठी वर्ष कुनै नकाम गरेर बितेनन् । सादा दिनचर्या, कर्मप्रति एकनिष्ठा, जागिरप्रति वफादारी, परिवारप्र्रति जिम्मेवारी, छोराछोरीको पढाइ लेखाइमा सजगता, भ्रष्टाचारको नामै नलिने लगभग निस्कलङ्क । मेरो जिन्दगी यस्तै छ । यी मेरा कुरामा कसैलाई पत्यार नलागे मेरो घर हेरे भइहाल्छ । मेरो लवाइ, खवाइ हेरे पनि भइहाल्छ ।
editor — Sun, 07/12/2015 - 18:33
अमृता लम्साल — Mon, 12/08/2014 - 01:01
नेपालका "महिलावादी"हरू मध्धेकी एक शशक्त "महिलावादी" नेत्री डाक्टर रेनु भण्डारीको एउटा भनाईले सरक्कै ध्यान तान्यो । उहाँलाई कुनै मन्त्रीले आफूलाई "महिलावादी" होइन "महिला अधिकारवादी" भनेर परिचय बनाउन सल्लाह दिएछन; यसको जवाफमा उहाँको भनाइरहेछ, "म एक महिलावादी हुँ र म त्यसै भनिनमा गर्वको अनूभूति गर्दछु ।"
editor — Sun, 10/12/2014 - 16:16
मान्छे मान्छे वीच भेदभाव हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । छुवाछुतको कुरो चलेकै हो, भोगेकै हो, कतै कतै अँझै पनि भोग्दैछन् । ऊ ठूलो जात, म सानो जात, म उँचो मान्छे, ऊ निचो मान्छे, उसको घरभित्र म पस्न हुंदैन, मेरो घरमा ऊ पस्न हुन्छ, हाम्रोले त्यो पधेंरोमा पानी भर्न हुंदैन, तिम्रोले यो मन्दिरमा पूजा गर्न हुंदैन, यस्ता वाद विवाद यी कानले कति सुने कति १ त्यस्तै लोग्ने (पुरुष) मान्छे, महिला (स्त्री) मान्छे वीचमा पनि छुवाछुत चलेकै हो जस्तो परसरेकी (छुई भएकी) महिला चार/पांच दिनसम्म छुन हुदैन । फेरि चोखिए पछि छुन हुन्छ, पकाएको खान हुन्छ यस्ता चलन प्रचलन थिदै थ्यो, छदै छ, केही खुकुलिएको छ । अर्थात बाटो, पधेरो छोईदैन आज भोलि १ सुकेका अन्न–पात, नभिजेका लुगा–फाटा, माझेर सुकेका भाडा–कुडां नछोइने मानेर चलनमा ल्याएका छन् ।
Gopal Aryal — Mon, 09/22/2014 - 11:08
संसार अनौठो छ । मान्छेहरू अनौठा छन् । कसैलाई मायाको भोक छ । कसैलाई अनौठो सौख छ । मलाई माया गर्ने मान्छे, मलाई घृणा गर्ने मान्छे, मेरो जीवनलाई बिचरा भन्ने र यहीँ जीवनसँग जल्नेहरू पनि धेरै भेटें मैले ।
ला.... मैले यो के लेखेँ ? किन लेखेँ ? अब के लेख्नु ? केही पनि थाहा छैन । तर मेरा मनबाट निस्किएका यी शब्दहरू यसै खेर जान्छन कि जस्तो लाग्छ । भोलि पर्सी डायरीमा समेट्छु भन्ने बिचार पनि आउँछ तर त्यति बेला त त्यो प्रतिलिपि मात्र हुन्छ । "यसको असली मजा त यसैमा छ नि !" जस्तो पनि लाग्छ तर यी पानाहरू कति सिरक्षित रहलान भन्न सकिन्न ।
दिनहुँ नशाको मातमा रमाउदैछन् मन्त्रीहरू
गोविन्द गोठालेको निधनमा एक अभिव्यक्ति
......म तिमीमा हराएँ,
रात बढ्न थालेपछि